Tsy mety fongana : mitombo tsikelikely ny andiam-balala | NewsMada
Nanomboka ny 1 hatramin’ny 10 febroary 2016, nahitana andiana kijeja vitsivitsy any amin’ny faritra Atsimo Andrefana, Androy ary Menabe. Mahatonga izany ny firotsahan’ny orana, mamelona sy mampitombo azy ireny. Tany amin’ny lemaka Manja, any Toliara sy lemak’I Bekily Fotadrevo, nisy andiam-balala, miaraka amin’ny andiany hafa.
Na izany aza, milaza ny tatitry ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (FAO), fa nihena ny firongatry ny andiam-balala, vokatry ny ezaka natao ny taona 2014-2015. Any Manja sy Bekily Fotadrevo, mety ho hary elatra ireo kijeja sady hivondrona, ka ilaina dieny izao ny fitiliana sy fandrarahana fanafody azy ireo, mba tsy hitombo sy hanatody, mialoha ny faran’ity volana febroary ity. Hamafisina io hetsika io manomboka ny volana marsa.
Tsy mahazo vaovao avy amin’ny mpamantatra ny toetr’andro
Na izany aza, nanamarika ny FAO, fa sarotra ny haminavina mialoha ny fivoaran’ny andiam-balala satria tsy manana antontam-baovao ho an’ny fotoana lavitra, ny sampandraharaha mpamantatra ny toetr’andro. Mampiasa helikopetera iray sy ekipa dimy misahana ny fitetezana an-tanety ny FAO sy ny mpiara-miombon’antoka aminy.
Nanomboka ny 26 aogositra 2015, fotoana nanombohan’ny famonoana ny valala andiany fahatelo, nahatratra 199.940 ha ny velarana andiam-balala voatondraka fanafody. Ho an’ny 11 hatramin’ny 20 febroary, hotetezina an-tanety any Befandriana Atsimo, Ejeda, Toliara, Bekily Fotadrevo ary ny tampon’i Belomatra. Hampiasana helikoptera kosa ny any tampon’i Mahafaly, Belomatra sy ny lembalemban’i bekily Fotadrevo.